व्यवसायमा सफल हुन चाहनुहुन्छ ? .. पहिला जागीर खानुहोस् ! | गृहपृष्ठ
Home रोजगारी व्यवसायमा सफल हुन चाहनुहुन्छ ? .. पहिला जागीर खानुहोस् !
on: June 03, 2019 रोजगारी
काठमाडौं । ठूलो भएपछि यस्तो व्यवसाय गर्छु, उस्तो काम गर्छु भन्ने सोचेर सानै उमेरमा रमाउनेहरू हामीले धेरै भेट्छौं । तर, कहिले कुनै कामको अनुभव नै नबटुली एकैचोटि व्यवसाय शुरू गरेर रातारात सफलता पाउनेहरू कति होलान् ? पक्कै पनि थोरै नै होलान् । विज्ञापन एजेन्सीमा काम गरेर आफ्नै विज्ञापन कम्पनी खोल्ने, कुनै सञ्चार गृहमा काम गरेपछि आफ्नै पत्रिका निकाल्ने, स्टेशनरी वा कपडा पसलमा काम गरेर आआफ्नै व्यवसाय शुरू गर्नेहरूको संख्या हाम्रो समाजमा धेरै नै पाइन्छ ।
यो राम्रो हो भन्छिन् फेशन स्टार्टअप जिलिंगोकी संस्थापक अंकिती बोस । बोसले पनि स्टार्टअप कम्पनी खोल्नुभन्दा अघि अरू नै कम्पनीमा काम गरेकी थिइन् । सोही कामका कारण नै अहिले आफू यहाँ आइपुगेको धारणा बोसको छ । जागीरले नै उनलाई हेर्ने र सिक्ने मौका दिएको हो । शुरूमा बोसले भेन्चर क्यापिटल र परामर्श कम्पनीमा काम गरेकी थिइन् । सो कामको अनुभवले के गर्दा हुन्छ ? के गर्दा हुँदैन ? दिगो व्यवसाय केले र कसरी निर्माण गर्न सकिन्छ ? भन्ने कुरा उनले सिकिन् । २७ वर्षको छोटो उमेरमै उनले पाएको सफलता लोभ लाग्दो छ ।
सन् २०१५ मा उनले आफूले गरिरहेको काम छाडिन् अनि जिलिंगोको सहसंस्थापक धु्रव कपुरसँग मिलेर ईकमर्श मन्च निर्माणमा लागिन् । अहिले यो कम्पनीको बजार मूल्य झण्डै १ अर्ब डलर छ । सिंगापुरमा मुख्यालय रहेको यो कम्पनीले अहिले दक्षिणपूर्वी एशियामा अनलाइनमा विभिन्न सामग्री बेचिरहेको छ । यस वर्षको फेब्रुअरीसम्ममा जिलिंगोका विश्वभर ७० लाखभन्दा धेरै सक्रिय प्रयोगकर्ता छन् । कम्पनीको मूल्य पनि ९७ करोड डलर पुगेको छ । यससँगै बोस १ अर्ब डलरको स्टार्टअप खोल्ने भारतकै पहिलो महिला बन्ने क्रममा छिन् ।
बोसका अनुसार पहिला खाएको जागीरले आफूलाई दक्षिणपूर्वी एशियाको भ्रमण गर्ने अवसर दिएको हो । यस क्रममा सो क्षेत्रका उपभोक्ताले के चाहन्छन् भन्ने बुझ्न मद्दत मिलेको सीएनबीसीसँगको कुराकानीमा उनले बताएकी छन् । बैंगलुरुमा एक भेन्चर क्यापिटल कम्पनीमा लगानी विश्लेषकको रूपमा काम गर्दा अमेरिका, चीन र भारत लगायत प्रमुख अर्थतन्त्रमा एमेजन, फ्लिपकार्ट र अलिबाबा जस्ता ईकमर्श कम्पनी फस्टाएको नजीकबाट नियाल्ने अवसर पाइन् । चीन र भारतमा जे भइरहेको भए पनि दक्षिणपूर्वी एशिया भने तीव्र गतिमा बढिरहेको बजार थियो । त्यहाँ आफूहरूले बेच्न लागेको प्रोडक्टका लागि प्रशस्तै ठाउँ रहेको निक्र्योल गरेर नै त्यहाँको बजारलाई लक्षित गरेर उनले कम्पनी खोलिन् ।
अहिले बोसको कम्पनी स्थापित भइसकेको छ । तर, प्रतिस्पर्धा चर्किएको अहिलेको अवस्थामा सधैं अगाडि रहन प्रतिस्पर्धीहरूलाई नजीकबाट नियाल्न भने उनले छाडेकी छैनन् । ‘मलाई लाग्छ हरेक तीन वा चार महीनामा मैले नयाँ कुरा सिकिरहेकी छु,’ बोस भन्छिन् ।